Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Izithuba zeofisi Cornwall Wadebridge
Iofisi etyunjwe ngokufanelekileyo kwidolophu ethengisa eWadebridge. Iofisi ibonelela nge-256 sq ft yendawo yokuhlala kumgangatho wokuqala ophantsi. Ezi ndawo ziyinxalenye yeNdawo yokuGqibela yeBurges, ephuhliswe ekuqaleni kweminyaka yoo-2000 kwaye ijonge indawo yeCamel Estuary. Isakhiwo sivumelekile
umbono Izithuba zeofisi ishicilelwe iintsuku 3 eyadlulayo
I-Wadebridge (; i-Cornish: iPonswad) yidolophu kunye neparish ekumantla eCornwall, eNgilani, e-United Kingdom. Idolophu ihambahamba kuMlambo i-Camel 5 yeekhilomitha (i-8.0 km) inyuka ePadstow. Inani labemi abasisigxina yi-6,222 kubalo lwe-2001, inyuka ukuya kwi-7,900 kubalo bantu be-2011. Zimbini iiwadi zonyulo edolophini (empuma naseNtshona). Inani labo lilonke yi-8,272Originally eyaziwa ngokuba yi-Wade, yayiyindawo eyingozi yokuwela umlambo kude kwakhiwa ibhulorho apha kwinkulungwane ye15th, emva kokuba igama latshintshela kwimo yalo yangoku. Ibhulorho leyo yayibaluleke kakhulu ngexesha leMfazwe yamakhaya yamaNgesi, uOliver Cromwell waya kuyithatha. Ukususela ngoko, yandiswa kabini kwaye iphinde ihlaziywe kwi-1991. I-Wadebridge yakhonzwa sisikhululo sikaloliwe phakathi kwe-1834 kunye ne-1967; Inxalenye yomgca ngoku iyindlela yeKhamera yokuhamba, indlela yokuzihlaziya yabahambi ngeenyawo, abakhweli beebhayisikile kunye nabakhweli bamahashe. Idolophu ibikwayindlela yezithuthi ezihamba ngebhotile kwindlela ye-A39 de yadlula e-1991, kwaye eyona ndlela iphambili yokuthenga, isitrato iMoolesworth, ngoku sihamba ngeenyawo. Idolophu inesikolo samabanga aphakamileyo apho abafundi bezemidlalo babefundile. Umboniso weRoyal Cornwall Show ngumboniso weentsuku ezintathu wezolimo obanjelwa eRoyal Cornall eMall Showall rhoqo ngoJuni.